Fanontaniana: Hanakorontana ny bisikiletanao ve ny Plan B - BikeHike
Hafiriana no manimba ny tsingerinao ny Plan B?
Mety hanakorontana ny tsingerinao mandritra ny volana maromaro ve ny maraina aorian'ny pilina?
Afaka mahazo fe-potoana faharoa ve ianao rehefa avy naka ny Plan B?
Manova ny ovulation ve ny Plan B?
Mety tsy hahomby ve ny Plan B?
Mety hisy fiantraikany amin'ny fadimbolanao ve ny pilina maraina aorian'ny 2 volana?
Mety ho afa-jaza ve ianao rehefa avy naka ny Plan B?
Ahoana no ahalalako fa mihanahana aho?
Inona avy ireo famantarana ny ovulation?
Ahoana no ahafantarako hoe ovulation aho?
Efa nisy bevohoka ve taorian'ny nakana ny Plan B?
Mandaitra ve ny pilina maraina raha miditra ao anatinao izy?
Misy fiantraikany amin'ny zanakao ve ny fitondrana Plan B?
Manimba ve ny Plan B raha efa bevohoka ianao?
Afaka manome anao fitsapana tsara ve ny Plan B?
Inona avy ireo famantarana ny fitondrana vohoka amin`ny herinandro voalohany?
Ahoana no ahafantaranao raha bevohoka ianao ao an-trano?
Afaka bevohoka ve ianao raha tsy ovulation?
Ahoana no ahafantarako raha tsy ovulation aho?
Firy andro talohan'ny ovulation ianao no bevohoka?
Ny Levonorgestrel dia hita ao amin'ny pilina fanabeazana aizana, fa ny Plan B dia misy fatra avo kokoa izay afaka manova ny haavon'ny hormonina voajanahary ao amin'ny vatanao. Ny hormonina fanampiny dia mety hisy fiantraikany amin'ny tsingerin'ny fadimbolana, ka mitarika ho amin'ny fotoana aloha na tara ary koa ny fandehanan-dra mavesa-danja kokoa na maivana kokoa.
Ny ankamaroan'ny fiovana ateraky ny fanabeazana aizana maika toy ny Plan B dia tsy maharitra mihoatra ny tsingerin'ny fadimbolana iray. Raha tara herinandro mahery ny fadimbolanao taorian'ny nakanao ny Plan B, dia mety ho bevohoka ianao, koa eritrereto ny hanao fitsapana ho an'ny bevohoka.
Ny fihinanana Plan B (antsoina koa hoe fanabeazana aizana maika, na ny pilina maraina) dia mety hanova vetivety ny tsingerin'ny fadim-bolan'ny olona iray, ka mety ho hafa ny fadim-bolanao mandritra ny iray volana farafahakeliny. Tsy misy manimba na mampidi-doza amin'ny fampiasana ny pilina maraina araka izay ilaina.
Ny fandehanan-dra tsy ara-dalàna sasany - fantatra amin'ny hoe spotting - dia mety hitranga aorian'ny fisotroanao ny pilina maraina. Ny fadimbolanao aorian'ny fitondrana vohoka (EC) dia famantarana fa tsy bevohoka ianao. Ara-dalàna koa raha mavesatra na maivana kokoa ny fadimbolanao, na aloha kokoa na aoriana noho ny mahazatra rehefa avy naka EC.
Araka ny etikety vokatra, ny Plan B dia manakana na manemotra ny ovulation, na ny famoahana atody. Mety hisoroka ny fampiraisana koa izany, rehefa mitambatra ny atody sy ny tsirinaina.
Ny pilina fanabeazana aizana maika amin'ny fatra iray dia misoroka ny fitondrana vohoka eo amin'ny 50-100% amin'ny fotoana. Ny antony sasany mety tsy hahomby ny pilina fanabeazana aizana maika dia ny fotoana ovulation, ny BMI ary ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina.
"Ny maraina aorian'ny pilina dia mety hanemotra ny fadimbolanao manaraka fa tsy manao izany foana. Mety ho vao maraina mihitsy aza ny fadimbolanao”, hoy i Julia, “Raha tara fito andro mahery anefa ny fadimbolanao, dia tokony hanao fitiliana ny vohoka ianao.”
Ny Plan B dia tsy afaka miteraka afa-jaza na mandratra anao raha efa bevohoka ianao. Raha TSY mahazo rà avy amin'ny fivaviana ianao ao anatin'ny 3 herinandro aorian'ny nandraisanao ny Plan B dia antsoy ny tobim-pahasalamana amin'ny 685-2470 mba hahazoana fotoana.
ny halavan'ny tsingerin'ny fadimbolanao - matetika ny ovulation dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 16 andro alohan'ny hanombohan'ny vanim-potoanao, amin'izay ianao dia mety ho afaka hiasa rehefa mety ho ovulate ianao raha manana tsingerina mahazatra. ny vozon-tranonjaza misy anao - mety ho tsikaritranao ny moka mando kokoa sy mazava kokoa ary malama kokoa mandritra ny fotoana atody.
Famantarana ny famokarana atodinaina Vokany tsara amin'ny fitiliana ny ovulation. Ny mucus vozon-tranonjaza fertile. Nitombo ny faniriana ara-nofo. Fitomboan'ny hafanan'ny vatana basal. Fiovana eo amin'ny toeran'ny vozon-tranonjaza. Nono malefaka. Saliva Ferning Pattern. Fanaintainan'ny ovulation.
Famantarana ny famokarana atodinaina Miakatra ny hafanan'ny vatana fototra, matetika 1/2 hatramin'ny 1 degre, refesina amin'ny thermometer. Ny haavon'ny hormonina luteinizing (LH) ambony kokoa, refesina amin'ny kitapo famokarana ao an-trano. Ny mucus vozon-tranonjaza, na ny fivaviana, dia mety ho hita mazava kokoa, manify, ary mihinjitra, toy ny fotsy atody manta. Fahalemena nono. Mivonto.
Tombanana ho 0.6 ka hatramin'ny 2.6 isan-jaton'ny vehivavy mihinana pilina maraina aorian'ny firaisana ara-nofo tsy voaaro no mbola ho bevohoka. Ny zavatra fantatry ny olona – ary tsy fantatr'izy ireo – momba ny pilina ho an'ny maraina dia nisongadina taorian'ny nizaran'ny mpanoratra Refinery29 ny tantarany momba ny fitondrana vohoka na dia teo aza ny fitondrana vohoka.
eny mbola hahomby ihany. Ny ankamaroan'ny fikarohana dia manambara fa ny fampiasana Plan B dia tsy miteraka fiovana eo amin'ny fonon'ny tranonjaza (endometrium). Tsia - ny fanabeazana aizana maika (aka ilay pilina maraina aorian'ny andro) dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny fitondrana vohoka aorian'ny firaisana ara-nofo tsy voaaro, fa tsy teo aloha.
Ny Plan B dia tsy manimba ny foetus mivoatra. Raha raisina amin'ny fomba diso ny Plan B mandritra ny fitondrana vohoka, dia tsy hanimba ny foetus mivoatra izany. Ny fampiasana ny Plan B dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fahafahan'ny vehivavy bevohoka amin'ny ho avy. Afaka mitazona pilina ao an-trano ny vehivavy raha sendra misy maika.
Ny Plan B dia pilina fanabeazana aizana, izany hoe manakana ny fitondrana vohoka. Raha efa bevohoka ianao dia tsy mandeha ny pilina. Ny zava-mahadomelina dia "tsy hanelingelina na hisy fiantraikany amin'ny fitondrana vohoka efa misy", hoy i Teva.
Ny Plan B dia fanabeazana aizana maika, ary tokony horaisina ao anatin'ny 72 ora aorian'ny fiterahana. Tsy hisy fiantraikany amin'ny valin'ny fitsapana ny fitondrana vohoka izany. Satria tsy marina ny fitsapana momba ny fitondrana vohoka 72 ora aorian'ny fiterahana, ny Plan B dia tsy manelingelina.
Ny soritr'aretin'ny vohoka amin'ny herinandro 1 maloiloy miaraka na tsy misy mandoa. fiovan'ny nono ao anatin'izany ny fahamoram-po, ny fivontosana, na ny fahatsapana mihetsiketsika, na ny lalan-dra manga. urination matetika. aretin'an-doha. nampiakatra ny hafanan'ny vatana basal. mivonto ao anaty kibo na entona. kizitina malemy na tsy mahazo aina tsy misy rà. havizanana na havizanana.
Ny ankamaroan'ny fitsapana FSH ao an-trano dia tena mitovy amin'ny fitsapana fitondrana vohoka tanterahina ao an-trano. Mba hizaha toetra mora dia ampiasao kaopy kely hanangonana urine amin'ny tsinay voalohany. Arotsaho ao anaty santionan'ny fisotrony ilay tsorakazo fitsapana ary apetaho amin'ny faritra fisaka raha mbola misoratra anarana ny valin'ny fitsapana.
Mety ho bevohoka ianao raha manao firaisana tsy voaaro na aiza na aiza manomboka amin'ny 5 andro alohan'ny ovulation ka hatramin'ny 1 andro aorian'ny ovulation. Tsy mety ho bevohoka ianao raha tsy ovulation satria tsy misy atodiny ho zezika ny tsirinaina. Rehefa tonga fotoana tsy misy ovulation ianao dia antsoina hoe cycle anovulatory.
Ny tena famantarana ny tsy fiterahana dia ny tsy fahafahana bevohoka. Ny tsingerin'ny fadimbolana izay lava loatra (35 andro na mihoatra), fohy loatra (latsaky ny 21 andro), tsy ara-dalàna na tsy misy dia mety midika fa tsy ovulation ianao.
Ara-teknika dia azo atao ny bevohoka raha manao firaisana mandritra ny dimy andro alohan'ny ovulation na amin'ny andro ovulation. Fa ny andro mahavokatra indrindra dia ny telo andro mialoha sy ao anatin'izany ny ovulation. Ny fanaovana firaisana ara-nofo mandritra io fotoana io dia manome anao ny vintana tsara indrindra ho bevohoka.
Valiny haingana: Afaka mikorontana ny Plan B amin'ny tsingeriko
Manimba ny tsingerin'ny fadimbolanao ve ny Plan B
Valiny haingana: Mikorontana ve ny tsingerin'ny Plan B Pill
Valiny haingana: Afaka manakorontana ny tsingerin'ny vanim-potoana ny Plan B
Afaka mikorontana ny Plan B miaraka amin'ny tsingerinao
Hanakorontana ny tsingeriko ny Plan B
Valiny haingana: Afaka manakorontana ny tsingerim-potoanako ny Plan B
Afaka manakorontana ny tsingerinao manaraka ny Plan B
Fanontaniana: Nanimba ny tsingerin'ny fadimbolanao ve ny Plan B
Fanontaniana: Mandra-pahoviana ny Plan B no manakorontana ny tsingerina
Fanontaniana: Mety hanakorontana ny tsingerin'ny fadimbolanao ny Plan B
Valiny haingana: Afaka mikorontana ny Plan B amin'ny tsingerin'ny vanim-potoanao